4shokelay: June 2011
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မှ NLD သို့ ပေးပို့သော အကြောင်းကြားစာကိုပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါသည်။
DPNS Statement to Protect and Support the NLD
Posted by 4shokelay at 4:46 AM No comments:
ပြည်ထဲရေး အကြောင်းကြားစာနဲ့ NLD ရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိစ္စ ကြေငြာချက်
Reply Letter by NLD
From Bogus Cease Fire to Civil War
Posted by 4shokelay at 9:18 PM No comments:
တွေ့တာလေး တွေ့သလို တင်ပေးလိုက်တာ
Posted by 4shokelay at 9:49 PM No comments:
Labels: ကာတွန်း, သတင်း
၂၅ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ကဒီလိုပြောတဲ့ ဗုံးသတင်း
ရေးတာက သူတို့ အလုပ် ဖတ်ပြီး သုံးသပ်ရမှာကိုယ့်အလုပ်
Posted by ဖိုးရှုပ်လေး
Posted by 4shokelay at 10:29 PM No comments:
Posted by 4shokelay at 1:25 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်များနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တို့ ထိတွေ့ ရင်ဆိုင်ထားသည့် နယ်မြေများတွင် တိုက်ပွဲငယ်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း KIA က ပြောသည်။
လိုင်ဇာရှိ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ဌာနချုပ်တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် စစ်ရေးပြအခမ်းအနား၌ တွေ့ရသော KIA စစ်သမီးများ (ဓာတ်ပုံ - Kachin News Group)
KIA တပ်များက မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော် ကားလမ်းပေါ်ရှိ နန်ဆန်ယန် ကျေးရွာ အခြေစိုက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး (စရဖ) ရုံးကို ယမန်နေ့နံနက်က ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အသေအပျောက်မရှိကြောင်း KIA တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဦးလနန်က ပြောသည်။
“ဗုံးခွဲတယ်ဆိုတာ လူထုကို ထိခိုက်ဖို့ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရ စစ်ရေးမဟာဗျူဟာကို ကြိုပြီး ဟန့်တားတာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ကလည်း KIA တပ်မဟာ ၅ ထိန်းချုပ်ရာ မိုးညှင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆင်ဘိုစခန်းတွင် တပ်စွဲထားသည့် ခလရ ၁၄၁ နှင့် ခလရ ၁၄၂ တို့နှင့် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားကြောင်း၊ အစိုးရတပ်ဘက်မှ တပ်သား ၅ ဦးကျဆုံးကြောင်း ဦးလနန်က ဆက်လက် ပြောသည်။
ထိုအစိုးရတပ် အကျအဆုံး သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီမှ သီးခြား အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မိုးမောက်ဒေသရှိ တာပိန်ရေကာတာ အနီး ဘွန်ဆွမ်တောင်ကုန်းတွင် တပ်စွဲထားသည့် KIA တပ်များကို အစိုးရတပ်က ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားရာမှ တိုက်ပွဲ စတင်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။
KIA အနေဖြင့် ဘွမ်ဆွမ်တောင်ကုန်းအနီးရှိ စခန်းတချို့မှ ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ရသော်လည်း စစ်ရေးအရ အရေးပါသည့် ဘွမ်ဆွမ်တောင်ကုန်းကို သိမ်းပိုက်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့် ရင်ဆိုင်ထိတွေ့ထားသည့် နေရာများတွင် နှစ်ဖက်စလုံး တင်းမာမှုများ၊ စစ်အင်အား ဖြည့်တင်းမှုများရှိကြောင်း ဦးလနန်က ဆက်လက်ပြောသည်။
ယခုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တင်းမာမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ KIA က တရုတ်နိုင်ငံကို ကြားဝင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အစိုးရကလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် ကချင်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် KIA အဖွဲ့သည် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဒေသဖွံဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဟန့်တားနှောက်ယှက်ခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် တရုတ် ၀န်ထမ်းများကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဗန်းမော်ခရိုင်သို့ သွယ်တန်းထားသည့် လျှပ်စစ်တာဝါတိုင်ကို မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခြင်း၊ လူထုအတွက် အရေးပါသည့် တံတား ၂၅ စင်းကို ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသည့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက် တခုတည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရန်လိုဖိနှိပ် တိုက်ခိုက်လိုခြင်းမရှိဟု ရေးသားထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာအစိုးရက တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးတွဲ၍ မြစ်ကြီးနားမြို့အနီးတွင် မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း၊ ရွှေလီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်ခန့်က စတင် အကောင်အထည်ဖော်နေသည်။
Posted by 4shokelay at 3:38 AM No comments:
အန်တီစုမွေးနေ့ အထိမ်း အမှတ် နှင့် ၁၅ ကြိန်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုး သ္မီးများနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ။
Statement on 15th Anniversary of Women's Day of Burma
Posted by 4shokelay at 6:35 PM No comments:
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှ တိုင်းရင်းသား လက်နှက်ကိုင်များအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်း အားသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
Statement on War Offensive by Juntas
Posted by 4shokelay at 6:32 PM No comments:
ဒီစကားပုံတွေနဲ့ အညီ သူဖြစ်လာသလား။
သူ့ကိုယ်သူမွေး ခဲ့ လို့သာသူဖြစ်လာပေါ့။
အန်တီစုအတွက်မွေးနေ့ လက်ဆောင် ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ရေးပေးလိုက် မိပါတယ်
Posted by 4shokelay at 10:00 AM No comments:
For Daw Aung San Suu Kyi's Birthday & Burma Women Day Pamphlet!
15th Bwd & 66thdassk-Bd-pamphlet_b&w
15th BWD & 66thDASSK-BD-Pamphlet_Color
If you want something to do, you can take it!!
Posted by 4shokelay at 7:41 PM No comments:
နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲများနှင့်ပက်သက်၍ ကြေငြာချက် ၂ ခု
နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲများနှင့်ပက်သက်၍ ကြေငြာချက်
Joint Statement No-3-2011 of 10 Orgs on PP Issue
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲများ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Posted by 4shokelay at 7:50 AM No comments:
ဧရာဝတီ ရုပ်သံမှ ကူးယူဖေါ် ပြပါသည်။
Posted by 4shokelay at 6:46 PM No comments: